May | 2019 | HimiloNetwork
Sucuudiga – Marka Adeegtadu Denbi ka dhaco!
Himilo May 17, 2019	Leave a comment 389 Views
Riyad (HN) — Jaariyad u dhalatay dalka Filibiin oo u shaqeysa qoys ladan oo ku nool caasimadda Sucuudiga, waxaa xargo lagu xirxiray geed kaddib markii sida la sheegay ay walxo qaali ah uga soo dhaqaaqday kuleylka qorraxda. 26 jirta lagu magacaabo Lovely Acosta Baruelo waxaa la sheegay inay ka careysiisay milkiilaheeda kaddib markii walxo qaali ku ah noloshiisa ay kaga ...
La kulan – Qaariga dusha ka qeybsan Qur’anka oo Sanbab qura ka neefsada.
Himilo May 17, 2019	Leave a comment 309 Views
DUBAI (HN) — Dhageysiga codkiisa macaan oo uu ku aqrinayo Qur’anka, wuxuu kaa ridayaa qamandhacada ku saaran. Isaga oo ku nool hal sanbab oo u fiyow oo kaliya, Nader Mahmud, oo 21 jir ah, wuxuu dalkiisa Lubnaan ku metelayaa tartanka sannadlaha ee Qur’anka oo ka dhacaya Dubai kaas oo bisha Ramadaan soconaya. In kasta oo tartankani uu yahay kiisii ugu ...
VIENNA (HN) — Sharci cusub oo gabdhaha Muslimiinta ah u diidaya inay xijaab u xirtaan dugsiyada hoose ayuu ansixiyay barlamaanka Austria – tallaab loo arkay inay ka-dhan tahay tira-yarta Muslimiinta ah, sida laga soo xigtay The Guardian. Wax walba oo loo arki karo inuu sida xijaabka ka dhigan yahay daboolasha timaha madaxa ayuu sharcigu diidayaa. Balse tiiyoo ay taasi jirto, ...
Himilo May 17, 2019	Leave a comment 588 Views
MUQDISHO (HN) — Xiddiga dalka Portugal iyo kooxda Juventus, Christiano Ronaldo ayaa lagu soo warramayaa inuu adduun dhan 1.5 milyan oo doolar ugu deeqay carruurta Falastiin ee ku dacdareysan gudaha Gaza. Tallaabadan ayaa la sheegay in Ronaldo uu uga gol leeyahay inuu garab istaag ugu muujiyo Muslimiinta Falastiin oo waqtigan ku sugan xaalad go’doon ah. Ma ahan markii ugu horreysay ...
Himilo May 15, 2019	Leave a comment 364 Views
MUQDISHO (HN) — Waa 5:00 galabnimo. Saacad oo qura ayaa ka harsan afurka. In Diyaargarowgii ugu danbeeyana loogu jirana waxaad ka garan kartaa goobaha barafka lagu iibiyo. Guuxa hugunka leh ee dalab-yeerintooda iyo is-garab riixa ay ugu haliilayaan in degdeg looga iibiyo barafka waxaad ka dheehan kartaa sheedda kore. Isticmaalka barafka iyo soonka bisha Ramadaan waa laba shey oo ugu ...
61 kun oo Carruur ah oo ka qeyb-gashay Ol’olaha Pray & Play.
Himilo May 14, 2019	Leave a comment 267 Views
KONYA (HN) — Dowladda hoose ee magaalada Konya ayaa sannadkii hore bilowday ol’ole cusub oo lagu magacaabo: “Kaalay imow Masjidka oo ku madadaalayso.” Hadafku waa in carruurta jirta da’da 7-14 u dhaxeysa inay salaadd subax kusoo dukadaan masjidka muddo 40 maalmood oo xiriir ah. Carruurta waxaa lagu dhiirri-gelinayaa siinta hadyado qaali ah oo isugu jira kuwo muuqda oo la taaban ...
Masjid Baaskiil ku abaal-marinaya Carruurta Ramadaanka kusoo dukada.
Himilo May 14, 2019	Leave a comment 297 Views
MUQDISHO (HN) — Masjid ku yaalla Kelantan, dalka Malaysia, ayaa balan-qaadayaa in carruurta salaadaha soo xaadirta Masaajidda inta lagu jiro bisha Ramadaan ay heli doonaan baaskiilo abaal-gud ah. “Kuwa salaadda subaxa, maqribka iyo cishaha masaajidda kusoo dukada, waxaa la siin doonaa baaskiil,” ayuu yiri Imam Ustaad Baharin Yuusuf ee masjidka Mahmudi.Yuusuf wuxuu sheegay in ol’olaha la bilaabay sannadkii hore si ...
Himilo May 14, 2019	Leave a comment 427 Views
MANILA (HN) — Maamulka Binolanan, oo ah xaafad yar oo 200 km waqooyi ka xigta caasimadda Manila, ayaa soo saaray sharci lagu mamnuucayo xanta – hadafku wuxuu yahay in bulshada laga ilaaliyo hadallada ku-tiri-ku-teenka ah ee ku dhex baaha hadiyo jeer. Qof walba wuxuu qaadayaa mas’uuliyadda ereyada afkiisa kasoo baxa. Marka ugu horreysa oo lagu helo xan, waxaa lagu ridayaa ...
Himilo May 9, 2019	Leave a comment 277 Views
Kampala (HN) — Ka Abdulraheem Basalirwa, oo ah 8 jir u dhashay dalka Uganda, taniyo markii lix jirsaday wuxuu jeclaa inuu soomo.Sannadkan, wuxuu doonaya inuu bisha oo dhan soomo, sida ay soo xigatay Khaliij Times. “Carruurnimadaydii ayaan jeclaa inaan soomo markii aan arko walaalkey iga weyn oo soomaya, waxayse ahayd mid ii daran,” ayuu yiri. “Maalinti koobaad waxaan dhaafi waayay ...
Himilo May 5, 2019	Leave a comment 307 Views
MUMBAI (HN) — Kama jirin halkan dhaqanka xeebaha lagu yaqaan. Mana aheyn goob lagu kulmo. Waxaa intaas dheer, waxay dadka u aheyd musqul lagu saxaroodo, goob qashinka lagu qubo. In lagu aalamiiteeyana runtii way adkeyd. Dhammaan nuucyada qashinku waxay ahaayeen heegan. Hadda waxaad arkaysaa boqollaal samafalayaal ah kuwaas oo jilbaha dhigtay si ay u gurbiyaan qashinka. Halkan waxay ku yimaadaan ...